အိန္ဒိယ၊ မြန်မာနှင့် ထိုင်းတွင် ကားမောင်းပြိုင်ကြသည့် အဖွဲ့များ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လေ့လာ?? - Yangon Media Group
မြဝတီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃
အိန္ဒိယ- မြန်မာ-ထိုင်းသုံးနိုင်ငံအတွင်း ကား မောင်းပြိုင်ပွဲ၌ပါဝင်သော မော်တော် ယာဉ်များသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် နံနက်က ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့မှ ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့သို့ ဝင် ရောက်လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့ကြီး များသို့သွားရောက်ရန်တာလွှတ် ထွက်ခွာသွားကြကြောင်းသိရသည်။
D & T Myanmar Travel Co.,Ltd ၏ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် အိန္ဒိယ-မြန်မာ-ထိုင်းသုံးနိုင်ငံ ကား မောင်းပြိုင်ပွဲခရီးစဉ်အဖြစ် Mr. Vikram Single ဦးဆောင်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ၅၂ ဦးနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသား တစ်ဦးအပါအဝင် စုစုပေါင်း ၅၃ ဦးတို့သည် ဧည့်လမ်း ညွှန် ဦးညီညီလွင်လိုက်ပါ၍ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ် ၂၃ စီးဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် မြန်မာ- အိန္ဒိယနယ်စပ် တမူးနယ်စပ်ဂိတ် မှဝင်ရောက်၍ တမူး၊ ကလေး၊ ပုဂံ၊ မန္တလေး၊ ရန်ကုန်၊ မော်လမြိုင်၊ မြဝတီမြို့များသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်တွင် မြဝတီနယ် စပ်ဂိတ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက် မြို့မှ မြဝတီနယ်စပ်ဂိတ်သို့ ပြန် လည်ဝင်ရောက်၍ ကျိုက်ထီးရိုး၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပုဂံ၊ ကလေးနှင့် တမူးမြို့များသို့ ဆက်လက်ထွက် ခွာရန် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် နံနက် ၇ နာရီတွင် မြဝတီမြို့ ဂရိတ်ဝမ်း ဟိုတယ်ရှေ့၌ မော်တော်ယာဉ် အားလုံးတန်းစီကာ မြဝတီခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထူးလွင်မှ အလံ ဝှေ့ယမ်း၍ တာလွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ကားမောင်းအဖွဲ့များသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် တမူးနယ် စပ်ဂိတ်မှတစ်ဆင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ပြန် လည်ထွက်ခွာကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ခရစ္စမတ် နီးချိန်တွင် ချင်းပြည်နယ်၏ အမှတ်တရ နေရာဖြစ်သည့် 'ရိဒ်' ရေကန်သို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည်??
NCA လက်မှတ်ထိုးထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက တိုင်းပြည်တစ်ခုတွင် တစ်ခုတည